जुवा-तास – Islam Guide
१- जुवाको नाफा भन्दा नोक्सान बढी छ। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “यिनीहरु रक्सी र जुवाको ’boutमा सोधिरहेका छन्। भनिदेऊ, “यसमा ठूलो पाप छ र मानिसहरुका लागि केही फाइदा पनि छ, तर यसका पाप फाइदा भन्दा धेरै छ।” (श्रोत- सूरह अल्-बकरह : २/२१९)
२- अल्लाहले व्यक्ति र समाजमा पर्न गएको नकारात्मक प्रभावले जुवा-तासलाई अपवित्र घोषित गर्नु भएको छ। यसले मित्रतालाई शत्रुतामा परिणत गर्छ, पारस्परिक घृणा र इर्ष्यालाई बढावा दिन्छ, अल्लाहको प्रशंसा र सलाह पढ्नबाट टाढा राख्छ, त्यसैले अल्लाहले यसबाट जोगिन आदेश दिनु भएको छ। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “हे आस्थावानहरु हो ! मदिरा सेवन गर्नु, जुवा खेल्नु, अल्लाह बाहेकको नाममा बलि दिनु तथा पासा खेल्नु अपवित्र र शैतानी कार्यहरू हुन्। त्यसैले यी कुराहरूबाट टाढा बस, यसरी तिमीहरु सफल हुनेछौ। शैतानले मद्यपान र जुवामा लगाएर तिमीहरु बीच शत्रुता र घृणा उत्पन्न गर्न चाहन्छ र तिमीहरुलाई अल्लाहको स्मरण तथा सलाहबाट रोक्न चाहन्छ। के तिमीहरु यी घृणित कार्यहरूबाट रोक्दैनौ ? ” (श्रोत- (सूरह अल्-माइदा : ५/९०-९१)
१- यसले मानिसहरु बीच शत्रुता र इर्ष्या उत्पन्न गर्छ। खेलाडीहरुलाई नै हेरौं, यिनीहरु इष्ट-मित्र हुन्, तर जुन बेला कोही सफल हुन्छ र माल समेट्छ त्यस बेला अरु रिसाउँछ र उसको मनमा एक प्रकारको इर्ष्या र प्रतिकारको भावना सृजना हुन्छ र विजेता पक्षलाई नोक्सान पुर्याउनको लागि आफ्नै साथीभाइको विरुद्धमा षड्यन्त्र रच्न थाल्छ। यो वास्तविक कुरा हो जसलाई सबैले जानेका छन् र अल्लाहको भनाईको तात्पर्य पनि यही हो। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “शैतानले मद्यपान र जुवामा लगाएर तिमीहरु बीच शत्रुता र घृणा उत्पन्न गर्न चाहन्छ।” त्यसैगरी यसले अल्लाहको स्मरण र सलाहबाट रोक्न चाहन्छ। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “यसले अनिवार्य सलाह र अल्लाहको स्मरणबाट टाढा राख्न चाहन्छ।” (श्रोत- (सूरह अल्-माइदा : ५/९०-९१)